Ihe Onye obula Kwesịrị Knowmara Banyere Ọzara | Network Meteorology
Ihe onye ọ bụla kwesịrị ịma banyere ihu igwe ọzara
Mgbe anyị chere echiche ọzaraDị ka ọ na-adịkarị, dunes nke ọzara Sahara na-abata n'uche, ma ọ bụ ọdịdị ala nke a na-ahụ n'akụkụ ụfọdụ nke Mexico. N’ebe abụọ a, ọ na-ekpo ezigbo ọkụ n’ehihie, ma n’abalị ọ̀tụ̀tụ̀ ịjụ oyi na-ada ada nke ukwuu.
Iji chọpụta ihe kpatara ya, ana m agba gị ume ka ị gụọ isiokwu a anyị kwadebere maka ihe dị iche iche todo el mundo ị kwesịrị ịma maka ihu igwe ọzara.
1 E nwere ọzara oyi
2 Ndụ dị n’ọzara
3 N'abalị oyi na-atụ n'ọzara
E nwere ọzara oyi
Ee, ọ bụrụ n’echiche na e nwere nanị ọzara ebe enwere otutu, oke ọkụ, unu ezighi ezi. Na mbara ala ndị ọzọ enwere ndị ọzọ ị ga-eyi, ee ma ọ bụ ee, akwa uwe na-ekpo ọkụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye oyi dịka m, na mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata n'okpuru 10ºC ị ga-amalite mkpa ezigbo jaket.
E kewara ọzara ndị a ụzọ abụọ oyi, nke bụ nke Gobi (Mongolia na China), nke Tibet, nke Ukwu Nevada Basin na nke Puna; na pola, nke, dị ka aha ya na-egosi, dị na Osisi. Ọnọdụ okpomọkụ nke afọ bụ gburugburu -2ºC n'ihe banyere oke ọzara oyi, yana -5ºC na mbara ọzara.
Ndụ dị n’ọzara
Obere, mana enwere. N’ezie, a naghị ahụkarị ha n’ime ọzara, kama na mpaghara dị nso na mmiri. N'ime ụmụ anụmanụ anyị na-ahụ akpịnke kamel, nke ochicho, nke coyote, na rattlesnake, ebili mmiri Mbara n'ọzara; na nke osisi anyị nwere ọtụtụ ụdị nke Acacia, dị ka A. tortilis, ndị yiri mango (Adansonia) ma ọ bụ Ọzara bilie (Adenium obesum).
N'abalị oyi na-atụ n'ọzara
Nke a bụ n'ihi na, enweghị ahịhịa na ígwé ojii, n'oge ala, ụlọ ahịa na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ma n’abalị ọ na-efunahụ dị ka oso. Ya mere, ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịda n'okpuru 0ºC.
Ọzara bụ ebe dị egwu, ị naghị eche? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ihe onye ọ bụla kwesịrị ịma banyere ihu igwe ọzara
Stella maris darlan dijo
E-e, aga m achọ ịmata ihe otu ụbọchị na-adị elekere iri abụọ na anọ dị ka ọzara kachasị ekpo-ọkụ. Usenubọk, uwemeyo ye okoneyo. Daalụ!! Nata Puku Ngọzi di nsọ site na Ezi Nna Chineke !!!
Zaghachi Stella Maris Darlan
Ihe si na La Niña pụta